Musaveni-ka Uganda oo ku dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashada madaxweynaha | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Musaveni-ka Uganda oo ku dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashada madaxweynaha
Musaveni-ka Uganda ayaa ku dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashada madaxweynaha
Shaqaalaha amniga ayaa si xoog ah u gaaf wareegayay caasimada Kampala sabtidii kahor sarkaalka
Guddiga doorashada ee Uganda ayaa Sabtidii ku dhawaaqay in madaxweynaha hadda talada haya Yoweri Museveni uu ku guuleystay doorashada madaxweynenimada, isaga oo kordhiyay xukunkiisa 35-ka sano ah isaga oo la tartamayay ninka ugu weyn ee la tartamayay waxaana lagu boorriyay muwaadiniinta in ay diidaan natiijada.
Museveni wuxuu ku guuleystay 5.85 milyan oo cod, ama 58.64 boqolkiiba, wadarta guud halka musharraxa ugu weyn mucaaradka Bobi Wine uu ku guuleystey 3.48 milyan codad ama 34.83 boqolkiiba, guddiga doorashada ayaa ku yiri warka telefishanka.
“Guddiga doorashada waxay ku dhawaaqayaan Yoweri Museveni… in loo doortay madaxweynaha jamhuuriyada Uganda,” ayuu yiri gudoomiyaha guddiga doorashada Justice Simon Mugenyi Byabakama.
Bobi Wine, 38-jir, ayaa ku booriyay dhalinyarada reer Uganda baaqyadooda ku aadan isbadalka siyaasadeed wuxuuna balan qaaday inuu soo afjari doono waxa uu ugu yeeray kalitalisnimada iyo musuqmaasuqa baahsan.
Shaqaalaha amniga iyo booliska ayaa si xoog ah ku maqnaa roondada caasimada, Kampala, maalintii Sabtida. Dowladda ayaa amartay in internetka la xiro maalin ka hor doorashada, welina ciladdii ayaa weli taagan.
Museveni, oo 76 jir ah, ayaa u ololeeyay muddo kordhin kale isaga oo ku dooday khibradiisa dheer ee uu xafiiska uleeyahay inay ka dhigeyso hogaamiye wanaagsan halka uu balanqaaday inuu sii wadi doono bixinta xasiloonida iyo horumarka.
Bobi Wine, oo ah fannaanad isu bedeshay xildhibaan magaciisa saxda ah uu yahay Robert Kyagulanyi, ayaa sheegay jimcihii inuu hayo caddeyn fiidiyoow ah oo ku saabsan musuqmaasuq codbixinta isla markaana uu la wadaagi doono fiidiyowyada isla marka la soo celiyo qadka internet-ka.
Byabakama wuxuu yiri sharciga Uganda, culeyska cadeynta wuxuu saarnaa Bobi Wine.
Ciidamada amaanka ayaa xiray aag aad u balaaran oo kuyaala agagaarka xarunta weyn ee Bobi Wine sabtidii waxayna u sheegeen saxafiyiinta caalamiga ah in aan loo ogoleyn inay galaan, goob joogayaal ayaa sidaas sheegay.
Bobi Wine ayaa ku eedeysay Museveni inuu been abuuray natiijada wuxuuna ku tilmaamay codbixinta “doorashadii ugu musuq-maasuqa badneyd taariikhda ugandha”.
Bobi Wine ayaa u sheegay Al Jazeera in masuuliyiintu ay u diidayaan inuu ka baxo gurigiisa.
Ku xigeenka afhayeenka ciidanka, Deo Akiiki, ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Reuters saraakiisha amaanka ee guriga Bobi Wine inay qiimeynayaan hanjabaadaha uu wajihi karo marka uu baxo: “Marka waxaa laga yaabaa inay ka hortagaan isaga oo daneynaya nabadgelyadiisa.”
Midowga Afrika iyo Bulshada Bariga Afrika waxay u direen kooxo kormeerayaal ah doorashada, laakiin koox mas’uuliyiin ah midkoodna kama jawaabin codsiyada faallooyinka ee ku saabsan khaladaadka dhici kara.
Booliska ayaa diiwaan galiyay 42 dambi oo laxidhiidha doorashada guud ahaan wadanka intii lagu gudajiray codbixinta iyo tirinta ilaa iyo hada, afhayeenka bilayska Fred Enanga ayaa habeenkii jimcaha ka sheegay TV-ga maxaliga ah ee NBS. Dambiyada waxaa kamid ahaa weerarada, laaluushka codbixiyaasha, iyo xatooyada iyo waxyeelada agabkii doorashada, ayuu yiri.
Doorashadii Khamiista ka hor ayaa ka rabshad badneyd codbixinnadii hore. Ciidamada amaanka ayaa la dagaalamay musharixiinta mucaaradka iyo taageerayaashooda intii lagu jiray ololaha, in kabadan 50 qof ayaa ku dhintey mudaharaadyadii bishii Nofeembar mid ka mid ah marar badan oo la qabtay Bobi Wine.
Previous articleUganda’s Museveni declared winner of presidential election
Next articleMushkilada Soomaaliya iyo halka laga heysto
Warar kala Duwan ayaa ka soo baxaya in wasaarada Difaaca Somaliya ay billowday in ay cadaadis saarto askarta ka diiwaan gashan islamarkaana ilaalada u...
Munaasabad uu goob joog ka ahaa madaxweyne Vladamir Putin oo lagu...